Cervical Spine X-Ray (လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ဆိုတာ) - Hello Sayarwon
Cervical Spine X-Ray (လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ဆိုတာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ » Cervical Spine X-Ray (လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ဆိုတာ)
Cervical Spine X-Ray (လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ဆိုတာ) ကဘာလဲ။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ဆိုတာ ဘာလဲ
လည်ပင်းဓါတ်မှန် (လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန် ဟုလည်းခေါ်သည်) ဆိုတာဟာ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ၇ ဆစ်ရှိတဲ့ လည်ပင်းမှ ကျောရိုးဆစ် တွေကို ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ဖြတ်ပြီး ရရှိတဲ့ဓါတ်မှန် ပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်မှာ အသံကြိုး၊ အာသီး၊ လေပြွန်၊ epiglottis (တစ်ခုခု မျိုချတဲ့အချိန်မှာ လေပြွန်ကို ကာထားပေးတဲ့ တစ်သျှူး) စတဲ့ အနီးအနားရှိ အစိတ်အပိုင်း တွေကိုလည်း ပြနိုင်ပါတယ်။
X- ray (ဓါတ်မှန်) ဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်ထဲကို ဖြတ်ပြီး သင့် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ပြပေးနိုင်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးပါ။ သိပ်သည်းတဲ့ တည်ဆောက်ပုံရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ (ဥပမာ – အရိုး) ဆိုရင်တော့ ဓါတ်မှန်မှာ အဖြူရောင်အနေနဲ့ ပြပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တခြားတစ်ဖက်မှာ ပုံရိပ်ပြနိုင်ဖို့ အလွန်သိပ်သည်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည် အနည်းငယ်သာ ဖြတ်သွားနိုင်လို့ပါ။ သွေးကြော၊ အရေပြား၊ အဆီလွှာတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေ စတဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ တစ်သျှူးတွေဆိုရင်တော့ သိပ်သည်းဆ နည်းတဲ့အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည်များများ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီလို အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆိုရင်တော့ ဓါတ်မှန်မှာ ခဲရင့်ရောင် အနေနဲ့ မြင်ရမှာပါ။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ကို ဘာကြောင့် ရိုက်ရသလဲ
တကယ်လို့ သင်ဟာ လည်ပင်း ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကြာရှည် ထုံထိုင်းနေခြင်း၊ နာခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ် အပေါ်ပိုင်း အားနည်းနေခြင်း စတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဓါတ်မှန်ကို စစ်ဆေးရတာဟာ အောက်ပါ အခြေအနေတွေ ရှိ၊ မရှိ သိရအောင်၊ အထောက်အထား ရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
လေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာ၊ သို့မဟုတ် အနီးနားမှာ ယောင်ယမ်းခြင်း။
အရိုးပွခြင်းကြောင့် လည်ပင်းရှိ အရိုးများ ပါးနေခြင်း။
အရိုးမှာဖြစ်တဲ့ အကျိတ်တွေ ရှိခြင်း။
လည်ပင်းအရိုး ကျီးပေါင်း ဖြစ်ခြင်း။
အသံကြိုးအနားတဝိုက် ဖောင်းကားပြီး ယောင်ယမ်းခြင်း။
လေပြွန်ကို ကာထားပေးတဲ့ တစ်သျှူးတွေ ယောင်ခြင်း။
လည်ချောင်း သို့မဟုတ် လေပြွန်တစ်လျှောက်မှာ ပြင်ပက ပစ္စည်းတစ်ခုခု တစ်နေခြင်း။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်မရိုက်ခင် ဘာတွေ ကြိုသိထားဖို့ လိုအပ်သလဲ
ဓါတ်ရောင်ခြည် အနည်းငယ်နဲ့ ထိတွေ့ရမှာပါ။ ဓါတ်မှန် (x- ray) ကတော့ ပုံရိပ်ကို ထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် အနည်းဆုံး ဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ ကိုသာ အသုံးပြုထားတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ ကလေးတွေမှာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပိုပြီးရနိုင်ပါတယ်။
တခြားသော ပုံရိပ်ဖမ်းနိုင်တဲ့ CT (စီတီ)၊ MRI တွေကိုတော့ ပြင်းထန် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဦးနှောက်အာရုံကြော ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိခြင်း၊ လူနာကို လုံလုံလောက်လောက် မစမ်းသပ်ရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဓါတ်မှန် အဖြေက မထင်ရှားခြင်း စတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန် ရိုက်ဖို့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားရမလဲ
သင့်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ ထင်ရင် ဆရာဝန်၊ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူကို ပြောသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန်မရိုက်ခင် ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ အားလုံးကို ဖယ်ရပါမယ်။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန် ရိုက်နေစဉ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်ကို ဓါတ်မှန်ခန်းထဲမှာ ဓါတ်မှန်ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးနဲ့ ရိုက်ရပါမယ်။ ဓါတ်မှန် ရိုက်ရာမှာ စံအနေအထား ၃ ခုနဲ့ ရိုက်ပါတယ်။ anteroposterior view – အရှေ့မှ အနောက်သို့ ရိုက်တဲ့ အနေအထား (ကျောရိုးကို အရှေ့က ကြည့်ပါတယ်။) lateral view – ဘေးမှ ရိုက်တဲ့ အနေအထား (ကျောရိုးကို ဘေးတိုက်ကြည့်ပါတယ်။)
peg view (လည်ပင်းကျောရိုးဆစ်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီ အနေအထားကို ရိုက်တဲ့အခါ လူနာက ပါးစပ်ဟထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။) ၅ ခုရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကွေး၊ ဆန့်တဲ့ အနေအထားတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန် ရိုက်တဲ့အခါ လူနာအနေနဲ့ ခေါင်းကို အပြည့်အဝ ကွေးထားပြီး ရိုက်ရပါတယ်။ လူနာရဲ့ ခေါင်းကို အရှေ့ကို တတ်နိုင်သလောက် ငုံ့ထားဖို့နဲ့ အနောက်ကို တတ်နိုင်သလောက် ဆန့်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန် ရိုက်ပြီး ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ထိခိုက်မှုတစ်ခုခုကို ကြည့်ဖို့ ဓါတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါ လည်ပင်းကို နေရာချ ထားရတဲ့အတွက် မသက်မသာ ဖြစ်နေတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာ ထပ်မရအောင်လည်း ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
အာရုံကြောနဲ့ ဆိုင်တာတွေ ကို MRI လိုမျိုး တခြား စစ်ဆေးချက်တွေကိုသုံးပြီး ဆက်လက် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာ သင့်ဆရာဝန်ဆီ ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးစရာ အချက်တွေရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်မှန် အဖြေက ဘာတွေကို ဆိုလိုသလဲ
သင့်ဓါတ်မှန်မှာ အရိုးတွေ၊ ပျော့ပျောင်းတဲ့ တစ်သျှူးတွေက ပုံမှန်ပဲ ဆိုရင် သင့်မှာ အရိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံမမှန်တာတွေ၊ ကျောရိုး အာရုံကြော ချို့ယွင်းနေတာတွေ၊ လည်ပင်း ကျီးပေါင်းဖြစ်တာတွေ မရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမမှန်တာတွေ ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို ကုသမှုအတွက် ဆက်လက် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်း နဲ့ ဆေးရုံ အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး လည်ပင်းကျောရိုး ဓါတ်မှန် အဖြေအတွက် ပုံမှန် အခြေအနေက အနည်းငယ် ကွာဟနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန်အဖြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရပါမယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 6, 2017
Neck X-ray. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003805.htm . Accessed Jul62016
Neck X-ray .http://www.healthline.com/health/neck-x-ray. Accessed Jul62016
Cervical spine X-ray. https://healthengine.com.au/info/Cervical_Spine_X-Ray. Accessed Jul62016